Button Zụrụ ga-enyere Social Media Onyinye na ROI? | Martech Zone
Wenezde, August 12, 2015 Tọzdee, Nọvemba 5, 2015 Douglas Karr
Igodo ịzụta bụ usoro ọhụụ na-ewu ewu na mgbasa ozi mmekọrịta, mana ha anaghị enweta ọtụtụ traction. N'ezie, otu Invesp nnyocha ahụ chọpụtara na ire ere azụmaahịa mmadụ mejupụtara naanị 5% nke ego ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na 2015. Ọtụtụ saịtị mmekọrịta na-agbasi mbọ ike inweta ntụkwasị obi ndị ahịa, yabụ nyiwe ga-egosi na ha karịrị naanị mmekọrịta ọha na eze iji merie ha.
Aka m dị ọkụ na ewu ewu nke bọtịnụ ịzụta mmekọrịta n'oge a. Ọ bụghị na agaghị m etinye ha n'ọrụ - ejiri m n'aka na enwere ezigbo ROI n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmejuputa ya. Otu onye ga-, n'ezie, pịa ma zụọ!
Ọ bụ ihe ọmụma zuru oke na isi ihe iji mee ka ọnụ ọgụgụ ntụgharị n'ịntanetị na-arịwanye elu bụ iji belata usoro dị mkpa iji gbanwee. N'iburu nke ahụ n'uche, ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na ya na itinye bọtịnụ zụta enweghị nkebi n'isi ụtụtụ zuo ahụ na-eme ka enwee uche zuru oke. Ma ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya. Ntughari mgbanwe na-ebelata usoro esi na mkpebi ịzụta zụrụ gaa na ntugharị… nsogbu a bụ na mgbasa ozi mmekọrịta anaghị enwe mkpebi ịzụta.
Nke ahụ ọ ga-agbanwe? Ekwenyesiri m ike na ọ ga-eme. Dika ndị ahịa tụkwasịrị obi na obere akpa ego ha na akụkọ banyere nnukwu ọrụ na-amalite ịmalite ahịa, ọ ga-abụrịrị na ha ga-eji ụzọ ndị a. Agbanyeghị, enweghị m ike ịhụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị ka onye a tụkwasịrị obi. Trusttụkwasị obi bụ isi ihe dị mkpa iji merie mkpebi ịzụta.
Onweghị nke nyiwe mmekọrịta ọ bụla nwere nọmba ị nwere ike ịkpọ n'oge a mgbe ị banyere n'ime nsogbu (ikekwe ha na ịzụta ihe, ejighi m n'aka). Achọrọ m ịpị ịzụta ma zipụ iwu n'ime abis, na-eche ma m ga-enweta ngwongwo m, na-eche ebe m ga-enweta nkwado ma ọ bụrụ na anaghị m?
Pinterest dị ka ebe nrụọrụ mmekọrịta kachasị dabara adaba n'oge a ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ndị na-ege ha ntị na-azụ ahịa ugbu a na ọwa Pinterest nwere ike igosipụta saịtị ma ọ bụ ụdị ndị a kwalitere.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke mmezu bọtịnụ ịzụta mmadụ
Facebook Buy bọtịnụ:
Twitter Buy bọtịnụ:
Pinterest Buy bọtịnụ:
Instagram Zụrụ bọtịnụ:
Tags: Attributionịzụta bọtịnụfacebook ịzụtazụta instagraminvespịzụta zụrụtwitter zụta
Nddị na ndị na-ere ahịa na Facebook kwesịrị ịma